Kuwani waa noocyada "Lite" ugu fiican ee barnaamijyada ugu caansan | Androidsis
Aan ka gudubno noocyada "Lite" ee ugu fiican barnaamijyada iyo shabakadaha bulshada ugu caansan. Waqtiga imaatinka 'Instagram Lite', nooca ayaa loo kala jaray howlo si dadka isticmaala mobilada aan awood badnayn ee aan marin u helin xawaare xiriir wanaagsan ay u awoodaan inay kula wadaagaan dhammaan noocyada waxyaabaha ku jira shabakadaha bulshada ay jecel yihiin.
Noocyadan "Lite" waa muhiim u ah malaayiin isticmaale taas oo ku taal gobolkaaga oo leh xiriir goos goos ah oo tayo liita. Marka sida Instagram Lite waxaan u haynaa midka loogu talagalay Twitter, Facebook laftiisa ama xitaa nooc ka mid ah Khariidadaha Google oo la yareeyey si meel looga dhigo megabeytyada waaweyn ee barnaamijka ugu weyn. U tag.
1 Khariidadaha Google Go
5 Rasuulka Lite
Khariidadaha Google Go
Waxaan ku bilaabaynaa liiska mid ka mid ah barnaamijyada "Lite" dhawaan suuqa soo galay ee barnaamijyada aaladaha moobaylka. Khariidadaha Google Go waa nooca la dhimay ee Khariidadaha asalka ah runtiina waxay na hor dhigeysaa nooc web ah oo adeegsanaya Chrome si loo bixiyo wax kasta oo kan ugu weyn horeyba noo siiyo.
Taasi waa, waxaan haysannaa khariidada leh walxaha oo dhan, in kastoo Si tartiib tartiib ah ayuu u rarnaan doonaa inta aan baarno, iyo qaybtaas dhinaca ah ee aan ka helno hawlaha Khariidadaha ugu caansan: taraafikada, gaadiidka dadweynaha, wadaagga goobta waqtiga-dhabta ah, boggagaaga iyo tabarucaadkaaga; ma iloobin wixii ku saabsan dejinta iyo waxyaabo kale.
Iyada oo la adeegsanayo Twitter Lite waa inaan ku rakibnaa APK, ilaa xilligan lagama heli karo wadankeena. App dib noogu celiya shabakad internet si markaa adeegsiga agabyada nidaamka, labadaba RAM iyo booska, ay ugu yartahay suurta gal.
Twitter Lite wuxuu ina hor mariyaa wax walba walxaha lagama maarmaanka u ah soo-celinta khibrada taasi waxay ku siinaysaa nooca ugu weyn iyo nooca webka. Waxay xitaa u ogolaaneysaa nafteeda raaxada ah inay na tusto guddi dhinac ah oo leh naqshad websaydh aad u fiican si loo kala saaro in yar oo ka hartay inta kale ee aan ku hayno xariiqyadan.
Soodejiso Twitter Lite APK
La sii daayay maanta, halkan waxaad ka ogaan kartaa warka, Instagram Lite ayaa dib inoogu soo celinaysa barnaamij aad u tiro yar oo kheyraad ah. Mid kale oo ka mid ah barnaamijyada 'Instagram', sida mid la daabacay maalmo ka hor kana socda telefishankiisa la yiraahdo IGTV.
Waxaan kula soo midownay barnaamij app ah kaas wuxuu noo geynayaa dhammaan howlaha inay heleen Instagram ka badan 1.000 bilyan oo isticmaale adduunka. Haddii aad rabto inaad ka nadiifiso moobilkaaga barnaamijyada culus, waxay horeyba u qaadaneysaa waqti inaad kala soo baxdo APK.
Soo degso APK-ka '' Instagram Lite ''
Facebook Lite wuxuu ahaa baahi baahsan oo loo qabo tiro wanaagsan oo dalal ah taas oo barnaamijka ugu weyni uu aad u cuslaa; sidoo kale waa xitaa xitaa kuwa naga mid ah ee leh terminaal wanaagsan. Nooca "Lite", in kasta oo aanu gebi ahaanba dhammaystirnayn, waa hab lagu fududeeyo culeyska mareegteenna.
In kasta oo labadii hore ay leeyihiin is-dhexgal u eg midka ugu weyn, Facebook Lite wuxuu ina siinayaa faa iidada helitaanka nooc kafiican qaabeynta. Taasi waa, waa inaan ula qabsanaa si aan u ogaanno halka ay ku yaalliin shaqooyinka ugu muhiimsan, maadaama dhammaantood la yareeyay in diiradda la saaro waxa ugu muhiimsan ee shabakaddan bulshada.
Iyo haddii Facebook horeyba miisaan u leeyahay, isla sidaas ayuu ku dhacaa Facebook Messenger. Inaad awoodo inaad si deggan u taaho waxaan leenahay lite lite, inaan sidoo kale wax ka qaban doonaa codsiyadaas shaashadaha ugu horreeya. Waxay ku dhowdahay inuu noqdo barnaamij lama huraan ah haddii aadan rabin inaad taleefankaaga ku asiibo asalka.
Halkan interface wuxuu raacayaa isla sidii Messenger, sidaas ilbidhiqsiyo gudahood ayaad ku dareemaysaa guriga iyo fudeydka haysashada barnaamijka websaydhka oo leh dhammaan waxyaabaha ay u baahan tahay ee ku saabsan adeegsiga iyo khibradda isticmaalka.
Dhammaad waxaan leenahay YouTube Go taas oo ka duwan kuwa kale, waxay na weydiin doontaa lambarka taleefanka si aan u xaqiijino inuu innagu yahay. Marka tan la dhammeeyo, waxaan si toos ah uga heli doonnaa is-dhexgal aad u kooban dhammaan heerarka. Taasi waa in la yiraahdo, waxaan ka hadleynaa taas oo kaliya waxaan ka kor mari doonnaa «guriga» iyo «Keydsan». Mid ka mid ah shaashadda weyn ee talooyinka iyo mid kale oo leh fiidiyowyo aan uga tagnay inaan mar dambe daawanno.
Waxa ugu fiican oo dhan, waxaan ku dooran karnaa tayada fiidiyaha xaddiga saxda ah ee megabytes waan cuni doonaa. Sawirka shaashadda waxaad ku arki kartaa sida aan u kala dooran karno tayada aasaasiga ah ee leh 4,2MB iyo midka caadiga ah ee na keenaya 34,2MB.
Soo Degso YouTube GO APK
ka noocyada "Lite" ka fiican ee barnaamijyadan si fiican loo yaqaan taas oo noo oggolaaneysa inaan keydinno batteriga, isticmaalka kheyraadka, fududeyno miisaanka keydinta iyo in moobiilkeenna uusan dhibaato badan soo gaarin. Gaar ahaan kuleylka xagaaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Noocyada "Lite" ugu wanaagsan ee barnaamijyada ugu caansan iyo shabakadaha bulshada